အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းသိမှတ်စရာ
သဇင်ဏီ March 27, 2009 at 4:32 PM
သိကောင်းစရာ မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာကို... လာဖတ်ပါ၏..
mgnge March 27, 2009 at 4:59 PM
လျှို့ ဝှက်ချက်ကို ဖော်သွားတယ်...။
တော်တော်ဆိုး နေ ပါလား ဒီတီတီတော့ 
မိုးသောက်ယံ March 27, 2009 at 6:27 PM
ခုမှပဲ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတော့တယ် ;)
သက်ပိုင်သူ March 27, 2009 at 7:40 PM
ဟီ.. ဟီ.. အနော်လက်မက အရှည်သား... ခွိ... ဂွိ
ဖိုးစိန် March 27, 2009 at 8:10 PM
မသေချာလို့ ခဏခဏ ပြန်တိုင်းကြည့်မိနေတယ်..
lonetone March 27, 2009 at 10:01 PM
ဟား ဟား ဟား အစ်မရေ မှန်လှချည်လားဗျာ။
ကျွန်တော်တော့ ရယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လက်မတိုင်း နေမိလို့ပါ။
lonetone March 27, 2009 at 10:06 PM
Sorry, it was my first time reading this and I have mistaken your name asagirl. Sorry!
အန်တီချမ်း March 27, 2009 at 10:16 PM
အင်း တခုခု (သို့) ၂ ခုခုတော့မှားနေပြီ
မိန်းမတွေ လုံးဝ မမန့်ပါလား
အင်း တခုခုတော့ တခုခုပဲ
Phyo Maw March 28, 2009 at 12:24 AM
သူပဲ သမီးတို့ရေ ညီမတို့ရေဆိုပြီး ရေးနေပြီးမှ ခုကျ စိတ်ကဖောက်။
ဖိုးဂျယ် March 28, 2009 at 12:51 AM
တိုင်းတော့ သေချာ တိုင်းမိသေးဘူးး)
မမသီရိ March 28, 2009 at 11:10 AM
Summary လုပ်ထားတာ တော်လွန်းတယ်..း)
တချို့ က ဗဟုသုတ၊ တချို့ ကို ဟာသ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိဘူးတာတွေ သိရတယ်
Anonymous March 28, 2009 at 7:17 PM
ဒါပေမယ့် လူမြင်ကွင်းမှာလဲ ..... ကြာကြာငေးကြည့်တာကောင်းဘူးတဲ့လေနော်... အဲ့ဒါလည်း ဖတ်မိရော အားရပါးရ ရီမိတယ်လေ... အဟီးးးး
ပြောရအခက် မပြောရအခက်ဆိုတာ ဒါပဲ ထင်ပါရဲ့
တေဇာ August 14, 2009 at 4:38 AM
ခစ်ခစ်ခစ်... သူသိတွားဘီ.. ဘီလိုများတူနေသိ....။
Webcam hack ထားလား.. ပြူးပြဲကြည့်... မဟုတ်ပါဘူး .. Cam လည်း မတပ်ထားပါဘူး...။ လက်မ လက်မ လက်မ...။ :P
Nasim mmnasimm June 19, 2013 at 6:29 PM
ဟိဟိခွိခွိခိခိ ကျွန်﻿﻿တော့လက်﻿မဟာရှည်﻿ပြီးပိန်﻿တယ်﻿ တူနဲ့ထုပြီးတုတ်﻿﻿အောင်﻿လုပ်﻿လိုက်﻿မယ်﻿ ဟိဟိ